China Waterproof USB Assembly, DC njikọ ụlọ ọrụ na-emepụta | Olink
nzukọ mmiri na-enweghị mmiri
Nọmba nlereanya: eriri waya na-eji eriri 66
Ihe nkwekọ waya
A na-eji eriri waya eme ihe iji mee ka imepụta akụrụngwa ka ọ dị mfe, ma mebere ya dabere na njiri geometric na eletriki nke akụrụngwa ọ ga-arụnyere.
A na-ejikarị eriri waya na ụlọ ọrụ eletrọniki, ụlọ ọrụ ụgbọ ala, na imepụta akụrụngwa na ngwa ọrụ ụlọ ọrụ, yana imepụta ngwaahịa ọcha dị ka igwe ịsa ahụ na draịva, ngwa nju oyi, na ngwa ụlọ ndị ọzọ.
Ejiri eriri waya na-eme ka ụlọ nke ihe ndị a buru ibu dịkwuo mfe site na ijikọ wiwi n'ime otu, ma ọ bụ ọtụtụ nkeji, maka ntinye "dobe". Site na ijikọ ọtụtụ wires, eriri, na subassemblies n'ime eriri, OEM ma ọ bụ onye nrụnye nwere naanị otu akụkụ iji wụnye. Tụkwasị na nke ahụ, eriri waya na-enye ohere ka emechara nzukọ ahụ agwụla ka ọ ghara ịkwado mmetụta nke abrasion na vibration, na site na imechi wires n'ime ngwugwu na-enweghị mgbanwe, a na-eji ojiji nke oghere eme ihe.
Ozugbo e guzobere imewe, usoro nke ịmepụta eriri waya na-amalite site na mmepe nke nkata nke ejiri mepụta akwụkwọ mmepụta na ụlọ nzukọ maka njigide. Mgbakọ mgbakọ ahụ, ma ọ bụ bọọdụ ntụtụ, bụ eserese zuru oke nke njikota ma gosipụta ihe niile mejupụtara yana ọnọdụ ha ma na-ejekwa ozi dị ka mbadamba akwa maka njigide ahụ. A na-enye wires ndị a chọrọ maka eriri ahụ na akwa ukwu ma belata ogologo oge achọrọ ma mata ya na mbipụta ma ọ bụ ịkọ aha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ozugbo ebipuru ogologo kwesịrị ekwesị, a na-ewepụ wires iji kpughee onye nduzi ahụ na-akwadoghị ma tinyezie ya na ọdụ ọ bụla achọrọ ma ọ bụ ụlọ njikọ. A na-etinye wires na akụrụngwa ndị a na bọọdụ ntụtụ wee kekọta ha site na eriri ọ bụla dị mkpa, eriri eriri, eriri USB, aka uwe, teepu, akwa nke eriri extruded, ma ọ bụ njikọ ọ bụla nke ndị a.
N'agbanyeghị ọchịchọ ịbawanye akụrụngwa, ihe nkedo waya, n'ozuzu, na-aga n'ihu na-arụpụta aka n'ihi ọtụtụ usoro dị iche iche.
Nke gara aga: Mgbakọ na-enweghị mmiri, DB 24pin Connector
Osote: Waterproof njikọ Iji DC USB
USB Assembly N'ihi Automotive
USB Assembly N'ihi Electronics
USB Assembly N'ihi Ngwaọrụ Homelọ
Ndị na-azụ ahịa Ndị Ahịa